ဝါးခယ်မ : ဖော်မဲ့ ဆိပ်ကမ်း ရဲ. လွမ်းချင်း
တကယ်တော. ကျုပ်ဘ၀မှာ ဒီလိုနေ.ရက်မျိုး ကြုံခွင်.တောင်မရှိတော.ဘူးလို.ထင်တာလေ ။ အမည်ခံသက်သက်လောက်သာ ရှိတော.တဲ့ ကျုပ်ဘ၀ ဘယ်သူမှတောင် အရာသွင်းကြတော.တာမဟုတ်ဘူးဗျ ။ တစ်ချိန်ကတော. ပုသိမ်ကောင် ၊ မြောင်းမြကောင် ၊ လပွတ္တာကောင် ၊ မအူပင်ကောင် စသဖြင်. ကျုပ်ကို လာခစားကြရတဲ့ သူတွေ ခုတော. လာခ စား ဖို.နေနေသာသာ ဟိုးးးမြစ်ထဲကဖြတ်သွားတာတောင် သိပ်မတွေ.၇တော.ဘူး ။ ဒါပေမယ်. ဒီနေ.တော. ကျုပ်မိုးလင်းထဲကပျော်နေတယ် ။
ကျုပ်ဆီမှာ လာပြီး အပြာရောင်ဆိုင်းဘုတ်လာကပ်တည်းက ကျုပ်မျှော်နေတာ ။ တစ်ချိန်က ကျုပ်ဆီမှာ အုံနဲ.ကျင်းနဲ. စုဝေးရောက်လာခဲ့ကြဖူးတဲ့ ကလေးတွေ သူတို.လာမယ်တဲ့ ။ နေရောင်လေးရင်.လာချိန် ကြိုဆိုမယ်.သူတွေကတော. ရောက်လာနေပြီဗျ ။ တီးမှုတ်ဖျော်ဖြေသံတွေကြားနေရတော. ကျုပ်အလိုလိုပျော်လာတယ် ။ ကားတွေ ကားတွေဆိုတာလည်း အို…. အများကြီးပါပဲ ။တစ်ချိန်ကဆို အဲ့ဒီကလေးတွေက ကျောပိုးအိတ်လေးတွေ နဲ. လက်ထဲမှာ T တွေနဲ. အိမ်ကထည်.ပေးလိုက်တဲ့ စားစရာတွေနဲ. ရောက်လာလိုက်ကြ ၊ ဂစ်တာတွေ စာအုပ်တွေ သေတ္တာတွေနဲ. ပြန်သွားလိုက်ကြ ၊ ကျုပ်ဆီမှာပဲ သီချင်းတွေဆိုကြ ၊ ရီဝေေ၀နဲ.ငြင်းကြ ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရင်ခုန်သံတွေ ဖြန်.ကြဲကြ နဲ. သောကြာနဲ. တနင်္ဂနွေ ညတွေဟာ သူတို.လေးတွေနဲ. ပြည်.နှက်နေခဲ့တာလေ ။
ခုသူတို.လာတော.မယ်ဆိုတော. ကျုပ်လည်း မျှော်နေမိတယ် ။ဟောမြင်ရပြီဗျ ။ ဗညားလတ်ဆိုတဲ့ ၂ထပ်ခွဲ …. ကျုပ်တောင်သူ.ပုံကိုမေ.သလောက်ဖြစ်နေပါပြီလေ ။ သင်္ဘောမကပ်ခင်တည်းက အောက်ကကြိုရောက်နေသူတွေ ၊ လာကြိုသူတွေက အော်ကြ အပေါ်ကလူတွေကလည်း ခုန်ချတော.မလို အားရ၀မ်းသာနှုတ်ဆက်ကြ ၊ တကယ်ပါဗျာ ။ ကျုပ်ကို ဟိုးးးးးတုန်းကနေ.ရက်တွေဆီပြန်ခေါ်သွားသလိုပါပဲ ။ အရင်ကလို အဲ့ဒီအော်ဟစ်နှုတ်ဆက် သံတွေ ကျုပ်တမ်းတလိုက်ရတာ နှစ်တွေဘယ်နည်းတော.မလဲဗျာ ။ကျုပ်လည်း ပျော်လိုက်တာဗျာ ။ နောက်တော.သူတို.ရဲ. ဆရာကန်တော.ပွဲဆီဆိုလား တက်သွားကြလေရဲ. ။
၃နာရိလောက်ကြာတော. သူတို.လေးတွေ သင်္ဘောဆီကို ပြန်ဆင်းလာကြတယ်ဗျ ။ တစ်င်္ဖွဲဖွဲနဲ.ပေါ. ။အရင်ကတော. ဂစ်တာလောက်နဲ.သာ ဟစ်ကြွေးနေတဲ့ ကလေးတွေက ခုတော. တီးဝိုင်းကြီးတစ်ခုပါ သင်္ဘော အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ဆင် လာတယ်ဗျ ။သိပ်မကြာဘူး သူတို. တီးဝိုင်းကအသံတွေ ထွက်လာပြီ ။နားထောင်လို.တော.ကောင်းသား ။ပါလာတဲ့သူအတော်များများက ပြန်လိုက်သွားမှာတဲ့ ။ အချို.က နေခဲ့မှာတဲ့ ။ အဲ့ဒါလိုက်နှုတ်ဆက်ရင်း သင်္ဘောပေါ်မှာ အတူတူ ဆိုကြ တီးကြမှာတဲ့ ။
အဲ့ဒီကလေးတွေ သူတို. အရင်ကအတိုင်းပဲဗျ ။ အသက်တွေကြီးလာကြပေမယ်. သူတို.ခုတော. ဟိုးတုန်းကလို လွတ်လပ်နေကြတယ် ။ ဟိုးး တုန်းကလို ပျော်နေကြတယ် ။ ဟိုးးး တုန်းကလို အချင်းချင်း ချစ်ကြတုန်းပဲ ။ ဟိုးးးး တုန်းကလို သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေ ခိုင်မာနေတုန်းပဲ ။သူတို.ရဲ. သိချင်းသံတွေကြားထဲ ကျုပ်လည်း နစ်မြောလို.ပေါ ။ အတူတူဆိုကြ အတူတူကကြ တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် ပွေ.ဖက်ရင်း ဟိုးတုန်းကအကြောင်းတွေပြောကြ ။ ကျုပ်မမြင်ဘူးတဲ့ကလေးအချို. လည်းပါရဲ. ။ အချို.ကတော. သူတို.ခောတ်မှာ ကျုပ်ဆီသိပ်မရောက်ကြတော.ပဲ အဝေးပြေးလောက်နဲ.သာရင်းနှီးကြတာလေ ။ အချို.ကတော. ကျုပ်ကလေးတွေရဲ. ကလေးတွေ ထင်ပါ. ။
ဒီလိုနဲ. ၄နာရီထိုးသွားချိန်မှာတော. ကျုပ်မုန်းတဲ့ အသံ တစ်ခုထွက်လာတယ် ..
ဟုတ်တယ် သင်္ဘော ဥသြ သံ
ဒါခွဲခွာခြင်းရဲ. သင်္ကေတ မှန်းကျုပ်သိတယ်ဗျ
လိုက်ပါ နှုတ်ဆက်သူတွေက သင်္ဘောပေါ်ကနေ မဆင်းချင် ဆင်းချင် ဆင်းနေကြတယ်
သင်္ဘောပေါ်က လူတွေက ကျန်ခဲ့ရမယ်.လူတွေကိုမခွဲနိုင် မခွာရက် နေခဲ့ခိုင်းနေကြတယ်
အဲ့ဒီထဲမှာ အချို.က အမြဲလိုလို တွေ.ခွင်.ရနေသူတွေလည်းပါတယ်
အချို.က တစ်ခါတစ်လေမှ တွေ.ခွင်.ရသူတွေလည်း ပါတယ်
အချို.က ကြုံတောင်.ကြုံခဲ တွေ.ခွင်.ရသူတွေလည်းရှိတယ်
သင်္ဘောက တစ်ဖြေးဖြေး ရေလည်ဘက်ဆီခွာထွက်နေတယ်
သင်္ဘောမီးခိုးခေါင်းတိုင်ဆီက မီးခိုးငွေ.တွေက ကောင်းကင်ဆီတက်လို.............
နေရောင်က အပူဖျော.ပေမယ်. အရောင်ရင်.လာနေတယ်..................
သင်္ဘောအပေါ်ဆုံးထပ်က ကျောင်းသားတွေက သူတို.သူငယ်ချင်းတွေဆီလက်တွေပြလို.
ကမ်းက ကျန်ခဲ့သူတွေကလည်း သင်္ဘောဆီမမှိတ်မသုံ ကြည်.ရင်း လက်တွေပြနေကြတုန်း
သင်္ဘောတီးဝိုင်းဆီက သီချင်း တစ်ပုဒ်အသံ ထွက်လာတယ်
ကျုပ်လေ ရင်ထဲမှာနင်.နေတယ်… နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားသူတွေရော ကျန်နေခဲ့သူတွေပါ တကယ်ခံစားမှုအပြည်.နဲ. နှုတ်ဆက်နေကြတာ
တကယ်က ဟုတ်တယ် ဘ၀ရဲ. အနာဂတ်အချိန်ဆိုတာ ဘယ်သူမှတာဝန်ယူရဲကြတာမှမဟုတ်တာ
ဘာအာမခံချက်မှ ရှိတာမှ မဟုတ်တာ
ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ. ၊ ဒိဆရာ/ဆရာမတွေနဲ. အကုန်လုံး ဒီနေရာမှာ နောက်တစ်ခေါက် ဒီလိုပြန်ဆုံမယ်လို. ဘယ်သူတာဝန်ယူရဲလဲ
အထူးသဖြင်. သင်္ဘောပေါ်က တစ်ချိန်ကကျုပ်ရဲ.ကျောင်းသားလေးတွေ
သူတို.ရင်ထဲမှာ ဟိုးးးးးး တစ်ချိန်က သူတို.ဒီမြို.လေးကို ၊ ဒီကျောင်းလေးကို ၊ ဒီသူငယ်ချင်းတွေကိုနောက်ဆုံး ခွဲခွာခဲ့ရချိန်ကိုပါ ပြန်သတိရနေကြပုံပဲ
လက်ပြနေတဲ့ တစ်ယောက်က တစ်ဖြေးဖြေး ဝှေ.ရမ်းနေတဲ့ လက်ကိုအသာချ ၊ လက်နှစ်ဘက်က သင်္ဘော လက်ရမ်းတိုင်ကို ခပ်တင်းတင်းကိုင် သေချာမမြင်၇တော.တဲ့ ဆိပ်ကမ်းဆီ ငေးကြည်.ရင်း အသက်ရှုဖို.ပါမေ.ပြီး သူ.တစ်ကိုယ်လုံး တုတ်တုတ်မှ မလုပ်ပဲ ဟိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးအတိတ်ဆီ ရောက်နေပုံပဲ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မီးခိုးခေါင်းတိုင်နားမှာ ခေါင်းကိုငုံ.ပြီး သူ.ပ၀ါလေးနဲ. မျက်ရည်စတွေကို သုတ်နေတယ်
ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်က သူ.နေကာမျက်မှန်အောက်မှာ မျက်ဝန်းအပြည်.မျက်ရည်တွေ စိုစွတ်နေတယ်
တစ်ယောက်က အကြောင်းမဲ. ကောင်းကင်ကိုမော.ကြည်.နေရင်း မျက်နှာကို အရမ်းတင်းထားတယ် …ကျုပ်သိတယ် သူကြည်.နေပေမယ်. ဘာကိုမှမြင်နေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
တီးခတ်နေကြသူတွေကလည်း သူတို.ကိုယ်သူတို. တီးဝိုင်းထဲမှာလို.မထင်တော.ပဲ အဆောင်ရှေ.က လမ်းပေါ် မှာလို.ထင်ရင်း နောက်ဆုံးနှစ်ရဲ. နှုတ်ဆက်ည လိုပဲ ကြေကွဲစွာ တီးခတ်နေကြတယ် မြင်နေရတာက သင်္ဘော တစ်စင်းလုံး အေးခဲသွားသလိုပဲ
နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်သွားတော.မယ် တဲ့
သူတို. ထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထောင်ဘေးကအကြော်ဆိုင် ၊ သူတို.သွားခဲ့ဖူးတဲ့မြို.ဖျားကပေါ်တော်မူ ၊ သူတို.နားခဲ့ဖူးတဲ့ စိမ်းမြကန်သာ
ရွှေချိန်ခွင်အဆောင် ၊ ထိပ်တန်းဆောင် ၊ ဂဋ္ဌုန်မင်းဆောင် ၊ သိန်းသန်းဆောင်နဲ.ကောင်းမှကောင်း ထမင်းဆိုင်
ဘီလီယံ ဆောင်၊ ဧ၀ရက်ဆောင် ၊ မာလာဆောင် ၊ အောင်ကြီး လဘက်ရည်ဆိုင်၊ ရွှေတောင် ထမင်းဆိုင် ၊ သဲကွင်းထမင်းဆိုင် နဲ. မိုင်လို ထညက်ခဲ
ခောတ်မှီ စားတော်ဆက် ၊ စံမတူ မုန်.ဟင်းခါး ၊ ရွှေထူး လဘက်ရည်ဆိုင၊် ပေါ်တော်မူ မြစ်ကမ်းပါးက ဆိုင်ခန်းလေးတွေ နဲ. အဝေးပြေးထဲက တောင်ထိပ်ပန်းပွင်.၊ ဟိုးးးးး တံတားဘက်ခြမ်းက တာပေါ်ဆိုင် နဲ. ည၁၀နာ၇ီကျော် ဂစ်တာ ဖမ်းပွဲတွေ
မေခ ၊ မလိခ ၊ မဉ္ဖူ ၊ GEC ၊ ကင်တင်း ၊ မယ်ဇယ် နဲ. မီးခိုးနံ.သင်း ထမင်းကြော် ၊ ပဲဟင်း ၊ ငပိရည်- တို.စရာ ၊ငါးကြင်းကြော် လက်နှစ်လုံး နဲ. ဘဲဥ အလုံးတွေ အခြမ်းတွေ
ကျောင်းဘေး လယ်ကွင်းထဲက လှေတစ်စင်း ၊ ကန်စွန်းခင်းနဲ. မယ်ဇယ်က Own Created ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်
ဆေးရုံဟောင်းရှေ.က ဆိုင်ခန်းလေးတွေ ၊ ကမ်းနား ညောင်ပင်အောက်နားက အသုပ်ဆိုင် - အအေးဆိုင်လေးတွေ
လေးဘီးကား ၊ သင်္ဘောဆိပ် ဆိုင်ခန်း ၊ အဆောင်ပေါ်က ကုလားကား နဲ. မေခ /မလိခကြားက Video Night Show
ဒါတွေအားလုံး သူတို.ထပ် ထားခဲ့ကြပြန်ပါပြီ
တစ်ခါတစ်လေ စကားများ ၊ တစ်ခါတစ်လေစိတ်ကောက် ၊ တစ်ခါတစ်လေ ရန်ဖြစ် ဒါပေမယ်. တကယ်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ခွဲကြရပြန်ပြီ
အတူတူငတ် ၊ တံဆပ်ကပ်အောင်လောင်နေတဲ့ ဆေးလိပ်ကို တစ်ယောက်တစ်လှည်.ဖွာ ၊ Calculator တွေ ပိုတာဆိုင်ပို.ရင်း မျှသုံး ၊ မယ်ဇယ်က ငပိရည် ၅၀ ဖိုးကို ၃ယောက်ခွဲစား အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းအားလုံးကို သူတို.သတိရရင်လည်း ရနေမှာပေါ.
အလိုလိုကို လွမ်းမောဖွယ်ရာ ညိုမှောင်မှောင်ဖြစ်ကြရတဲ့ကြားထဲ ခွဲခွာခြင်းတွေကိုပါ သူကသယ်ဆောင်လာသေးတယ်
ဘယ်တော.မှ ဒိနေရာကို ဒီလိုပြန်ရောက်လာကြဦးမယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှသိနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး
သင်္ဘောဆီက အသံတွေ ကျုပ်ကြားနေရတုန်းပဲ
လွမ်းတတ်ရင်လည်း လမ်းမှာပဲ လွမ်းတော.မယ်……………….
ခွဲခွာဖို. ရင်နာဖို. ကြုံခဲ့ပြီ
ကံကြုံရင် ပြန်ဆုံကြဦးမယ်……………………..တဲ့ သူတို.ရင်နဲ.ဆိုတဲ့သိချင်း မို.ထင်ပါ.
ငိုသံသဲ့သဲ့ ပါနေတယ်ဗျာ ။
ပျပျလေးပဲမြင်၇တော. သင်္ဘော ……. ကမ်းပါးပေါ် မတက်ချင်တက်ချင်ပြန်တက်သွားကြတဲ့ နှုတ်ဆက်သူတွေ နောက်ဆုံးတော. ကျုပ်လည်း မူလအတိုင်း အဖော်မဲ့ သင်းကွဲ ထီးတည်း ကျန်နေခဲ့ရင်းနဲ.ပဲ …………………………..
တကယ်လို.များ နောက်တစ်ခေါက်ဆုံခွင်. ဆိုတာရှိခဲ့ရင်………………..
Labels: Maubin GTI GTC TU, အတွေးအမြင်.နှင်. သုတ ရသ စာစုများ